I-WOWOW No Drill Toilet Paper Holder BrBr Nickel
Ikhaya / izesekeli / Izinto Zokugeza / WOWOW Ayikho i-Drill Toilet Paper Holder Brush Nickel
Lo mnikazi wamaphepha wethoyilethi ugcina umqulu owodwa ugcinwe kwimfashini futhi ulungele ukusetshenziswa.
Isisabalalisa siqonde ukufaka kumakhabethe noma ezindongeni futhi kungumdlalo omuhle kakhulu wokugeza omncane, uhhafu wokugeza, namakamelo we-powder. Izivakashi zizokwazi ngokunembile ukuthi zingatholaphi umqulu wezicubu zokugeza. Ingalo evulekile yenza ukuthi kungabi namandla ukufaka ngokushesha umqulu.
imininingwane yasendlini yangasese yokuhambisa iphepha 4010001 imininingwane:
Iyaqina futhi ivikelekile - zonke izakhiwo zensimbi engagqwali, ziqinisekisa impilo yensizakalo ende. Ukuhlelwa kwekona eliyindilinga, kuphephile ukuthi izingane zikusebenzise.
Ukusekelwa kwemininingwane - leli roli lephepha langasese lihlinzekwa nge-admula eyedlulele enamacala amabili. Isetshenziswa lapho kufakwa ama-racks ethawula wephepha ukudala ukuhamba noma ukushelela
Ukusebenza okunamandla - isakhiwo esilula nesinomusa Esamukelekayo endlini yakho yokugezela, ikhishi, indawo yokugezela, indlu yangasese, i-rv, imoto yokuvakasha, i-camper, ingabamba ithawula, iphephandaba, njll. Ipeni pole lenza kube lula ukudonsa amathawula wephepha
Izimfanelo - ukubukeka kwesimanje futhi okulula, kufana nosayizi abaningi bohlu lwamaphepha, ingalo enamandla engu-5-intshi.
I-3m strip yokuzihlanganisa - ukufakwa okusheshayo nokulula. Ukunamathela okuqinile nokuvimba amanzi. Azikho izimbobo zokubhola ezidingekayo. Susa kalula ngaphandle komkhondo osele. Ungaxhumana nokuhlakanipha uma udinga usizo lokusetha.
I-SKU: 4010001 Categories: Izinto Zokugeza, izesekeli Tags: nickel, I-Wall Isekelwe
0.3 kg = 0.6614 lb = 10.5822 oz